सलहेसः इतिहासमा नअटाएका लोक नायक ! | KTM Khabar
सलहेसः इतिहासमा नअटाएका लोक नायक !
२०७३ कार्त्तिक ११ गते १७:३९ मा प्रकाशित
आदित्य महतो, कक्षा ९ मा अध्य्यनरत
विश्वमा धेरै महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरु छन् । जुन मानिस कुनै महत्वपूर्ण काम गर्छन, समाजमा महत्वपूर्ण योगदान दिन्छन्, जसले महत्वपूर्ण काम गरेर इतिहास रच्छन्, उनलाई ऐतिहासिक व्यक्तित्व भनिन्छ । मानिसहरु जुन वर्गको भएता पनि, जुन सुकै धर्म, संस्कृति मानेतापनि समाजमा महत्वपूर्ण काम गर्यो भने समाजकोलागि उत्थान र विकासको काम गर्यो भने उनलाई ऐतिहासिक व्यक्तित्व मानिन्छ ।
उनको लागि हाम्रो मनमा एक प्रकारको देशप्रेमी भाव, आफ्नो समाज र जनताकोलागि मदत गर्ने र विकास गर्ने भाव, इच्छा तथा चाहना हुन्छन् ।
त्यस्तै ऐतिहासिक व्यक्तित्वमा एक हुन, राजा सलहेस जो जय वर्दन शैलेश नामले पनि प्रसिद्ध छन । उनको जन्म पांचौ शताब्दीमा भएको विभिन्न विज्ञ र इतिहास जान्ने व्यक्तिहरुले मान्दै आएका छन् । जुन मिथिलाको मैसौथा वर्तमान नेपालको सिरहा जिल्लामा पर्दछ ।
सलहेस जसलाई आधुनिक कालमा शैलेश पनि भनिन्थ्यो उनको जन्म बारे विभिन्न प्रकारको बिश्वास रहेको पाइन्छ । मानिसहरुले मान्दै आएका छन् की उनको जन्म गर्भबाट नभई मिथिलाको मैसौथा भन्ने स्थानमा नवजात शिशुको रुपमा प्राकट भएर भएको थियो । उनी एउटा शक्ति थिए र मानिसको रुपमा पृथ्वीमा अवतरित भएका थिए भन्ने विश्वास स्थानीय मानिस र विज्ञहरुको रहेको छ ।
उनको जन्म पृथ्वीमा जनहितको लागि रहेको सबैले मान्दै आएका छन् । उनलाई मिथिलामा लोक नायकको नामले पनि चिनिन्छ । उनले मिथिलाका मानिसहरुको लागि धेरै महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । यस कारण मानिसहरु विशेषगरि मिथिला र किरांत क्षेत्रका बासिन्दाहरु उनलाई अहिले सम्म लोकनायकका रुपमा मान्दै आएका छन् । सलहेसको गाथा मिथिलांचलको ऐतिहासिक, राजनैतिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक परिवेशको जिवंत अभिलेखको रुपमा भारत र नेपालको सिमाक्षेत्रमा लोक प्रचलित छ ।
उनले आफ्नो समाजकोलागि यस्ता महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् की उनि हाम्रो मनमा र आत्मामा बसेका छन् । उनको योगदान कहिले पनि विर्सिन नसकीने छ । उनले लोकहितको लागि र जिव जनावरहरुकालागि धेरै महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए । जसकारण उनलाई मानिसहरु देवताको रुपमा पुजा गर्दछन् । अहिले वर्तमान कालमा मान्छेहरु उनको आराधना गर्दछन् । नेपालको भित्री पहाड देखि सम्पूर्ण मिथिलान्चल साथै उत्तर भारतका स्थानीयहरु उनको आराधना गर्दछन् ।
उनि खासगरि दुसाध जाति (हाल दलित) को भए पनि ब्राहमण, क्षेत्री लगायत विश्वको सबै श्रद्धाले बैशाख सक्रान्तिको दिन उनलाई अर्चना गर्दछन् । उनलाई मानिसहरु लोक देवताको रुपमा पुजा अर्चना गर्दछन् ।
विज्ञहरुको अनुसन्धानको फलस्वरुप हामीले यो प्रेरणा पाएका छौ की सलहेसले आफनो युगको विषम परिस्थितीबाट माथि उठेर जुन सत्कर्म, सद्भाव र प्रेम मार्ग र नयां आदर्शको प्रतिपादन गरेका थिए । निश्चय नै उनको देवरुपको द्योतक हो ।
हाम्रो देशमा अन्य धेरै राजा तथा महाराजाले आफ्नो सत्ता बसाएका कारण उनिहरुको इतिहास र साहित्य लेखियो । तर सलहेस एक लोक नायक भएर पनि मिथिलांचलका नागरिकहरुले उनलाई आफ्नो राजा मानेता पनि उनलाई विभिन्न कारण देखाई देशको ऐतिहासिक तथा महत्वपूर्ण व्यक्ति हुदां हुदै पनि उनको इतिहास अहिले सम्म लेखिएन । यस कारण हामीले आफ्नो पुर्खाको विरता र एउटा देशप्रेमी भाव र उनको ऐतिहासिकता विश्व सामु ल्याउन प्रयास गर्नु पर्दछ ।